थाहा पाइराख्नुस् सर्पले डास्दा के गर्ने ? के नगर्ने ? | Rajmarga
थाहा पाइराख्नुस् सर्पले डास्दा के गर्ने ? के नगर्ने ?
टोकेको स्थानमा काटेर रगत झार्ने प्रयास नगर्नुहोला, यसले शरीरको तन्तु नष्ट गर्छ। एजेन्सी
Previous post: हक्कानी सञ्जालका संस्थापक जलालुद्दीनको मृत्यु
Next post: यसरी निर्माण पूरा हुँदैछ भारतमा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो मुर्ति (फोटोफिचरसहित)